ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း WATCH - Tom Holland နှင့်အတူ 'The Devil All the Time' အတွက်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်အားအေးဆေးပါစေ
by Waylon ဂျော်ဒန် သြဂုတ်လ 13, 2020
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် သြဂုတ်လ 13, 2020
Netflix နဲ့ သည်၎င်း၏အသစ်သောသည်းထိတ်ရင်ဖိုများအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလားအလာများစွာရှိသောငရဲနှင့်အတူကြယ်တစ်လုံးပါသည့်ရုပ်ရှင်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတွင်ပြုလုပ်သောဤရုပ်ရှင်သည်စာရေးဆရာ Donald Ray Pollock ၏အမည်တူ 2011 ခုနှစ်ပွဲ ဦး ထွက်ဝတ္ထုကိုအခြေခံသည်။
IMDb မှတရားဝင်အနှစ်ချုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအထိဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်ကောင်များဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိအသတ်ခံရသူ ၀ ီလာဒ်ရပ်စ်လ်တွင်သူ၏ဆုတောင်းပတ္ထနာတွင်မည်မျှစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုရှိသည်ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ကင်ဆာရောဂါဖြင့်နာကျင်စွာသေဆုံးခြင်းမှသူ၏လှပသောဇနီးဖြစ်သူ Charlotte အားမကယ်တင်နိုင်သူဖြစ်သည်။ အမေရိကနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်လူသတ်သမားများဖြစ်သော Carl နှင့် Sandy Henderson တို့သည်အမေရိကရှိအဝေးပြေးလမ်းမများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နှင့်ဖြုတ်ပစ်ရန်သင့်လျော်သောမော်ဒယ်များကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ပင့်ကူကိုင်တွယ်သောတရားဟောဆရာရွိုင်းနှင့်သူ၏ခြေဆွံ့နေသော virtuoso-guitar-sidekick သီအိုဒေါရ်သည်တရားမှပြေးသည်။ ထို့အပြင် Arvin Eugene Russell, Willard နှင့် Charlotte ၏မိဘမဲ့သားလည်းဖြစ်သည်။ သူသည်ကြီးပြင်းလာပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင်အကြမ်းဖက်သူဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Tom Holland (Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ.), ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန် (သင်းပင်း), Sebastian Stan (Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ), ဘီလ် Skarsgard (IT), Mia Wasikowska (ကတ္တီပါနီ Peak), Riley Keough (အရူးမက်စ်: Fury လမ်းမကြီး), Haley Bennett က (အဆိုပါရထားပေါ်တွင်မိန်းကလေး) နှင့် Jason Clarke (Winchester က).
မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် Netflix တွင် ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ပြသမည်။ အောက်ကကြောင်းနောက်တွဲယာဉ်ထွက်စစ်ဆေး!
SOURCE မှ: သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်
ဥပဒေကြမ်း skarsgardHaley Bennett ကJason Clarkeမီယာ WasikowskaRiley Keoughရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်Sebastian Stanမာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ်တွမ်ဟော်လန်Waylon ဂျော်ဒန်
iHorror သီးသန့်ကလစ် - 'တောအုပ်အတွင်းလူသတ်မှု'